Qormada Qormadayda ee Soomaaliya
Shaqsigaaga Qor Qormadayda adiga oo aan bixin lacag qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Sida Loo Qoro Adeeggayga Qormada
Marka, haddii aad fadhiisatay saacado oo aadan wali bilaabi karin qoraalkaaga haddaba la xiriir mid ka mid ah shirkadaha badan ee bixiya inay qoraalkayga ii qoraan. In kasta oo Essay Tigers ay ku taal Huntington Beach, Kaliforniya, waxay siisaa adeegyo qorista qorista ardayda kulleejada adduunka oo idil. Haddii aad u baahan tahay inaad qorto qormo sababo la xiriira imtixaannada meeleynta dugsiga sare ama sababta oo ah waxaad codsaneysaa kuleejo, waxaad ku kalsoonaan kartaa shaqaalaha khibradda leh inay kaa caawiyaan xilligan adag. Haddii aad diyaar u tahay inaad bilowdo xirfaddaada jaamacadeed ama aad u baahato xoogaa jihada ku saabsan arrinta, markaa tani waxay noqon kartaa waxa aad u baahan tahay. Ka dib oo dhan, qoraalkaagu wuxuu matalayaa adiga iyo mustaqbalkaaga. Sidaa darteed, waxaad dooneysaa inay kaamil noqoto.
Shaqaaluhu waa kuwo saaxiibtinimo leh oo edeb leh, waxayna ku leeyihiin xafiis wax yar uun ka fog dhismaha jaamacadda. Xafiiskoodu wuxuu furan yahay Isniinta - Jimcaha saacadda 4. m. ilaa 7 p. m. Xitaa waad wici kartaa fasalada kadib haddii aad su'aal qabto. Waxay bixiyaan adeegyo qoraallo kala duwan ah, oo laga helo jawaab celin degdeg ah, dib u eegis bilaash ah, iyo aaladaha qoraaga internetka. Shaqaaluhu si dhakhso leh oo hufan ayey u shaqeeyaan si ay ula jaan qaadaan wixii waqtiyada kama dambaysta ah ee iman kara. Intaas waxaa sii dheer, waxay diyaar u yihiin booqashooyinka guriga ama xafiiska, taas oo waliba damaanad qaadaysa in si dhakhso leh oo dhakhso leh laguugu keeno waraaqahaaga la dhammaystiray.
Haddii aad u baahan tahay tilmaamo ku saabsan sida aad qormadeyda iigu qoro, markaa uma baahnid inaad si adag u raadiso. Waxaa jira ilo badan oo laga heli karo internetka tixraac deg deg ah iyo talo bixin. Inta badan softiweerka ogaanshaha xatooyada wax walba ma qabsado; haddii ay jiraan tixraacyo ama qoraallo, weli waxaa jirta fursad ay ku nuqulan karaan iyaga oo aan macno u lahayn. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa nooca macluumaadka aad ku darto markaad ka warbixineyso khibradahaaga shaqsiyeed. Qoraallada shaqsiyeed guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay ka kalsooni badan yihiin qoraallada qoran.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka walaacsan yihiin ardayda haysta maqaallada isla waqtigaas fasalladooda ayaa ah haddii ay awoodi doonaan inay ku soo gudbiyaan shaqada waqtigeeda. Qaar ka mid ah shirkadaha adeegga qorista waxay bixiyaan dib-u-eegis bilaash ah oo loogu talagalay shaqooyinka qaarkood. Haddii aad isticmaasho adeeg curis tayo leh oo leh rikoodh wanaagsan oo ku saabsan dhammaystirka shaqooyinka waqtiga loogu talagalay, markaa waxay u badan tahay inaad heli doonto ugu yaraan hal nuqul oo dib-u-eegis bilaash ah laguugu diro. Waxa kale oo aad u qalmi kartaa dib-u-eegisyo dheeraad ah oo bilaash ah inta lagu jiro simistarka haddii aad caddeyso aqoonta aad u leedahay waxyaabaha loo baahan yahay shaqo kasta.
Ardayda iskood isu maamula waxay si weyn uga faa'iideysan karaan tababaraha qorista ardayda. Qoraa maqaal xirfadle ah ayaa ku siin kara talo qiimo iyo tusaaleyn ku saabsan sida loo qoro qoraalkayga oo lacag ah. Tababarayaasha maqaalka xirfadeed waxay u abuuri karaan qoraallo qoraal ah shaqooyinkaaga kaa caawin doona inaad qorto dukumiinti aan cillad lahayn. Haddii aad wax u qorto si joogto ah, markaa waxaa laga yaabaa inaad horeyba u laheyd buug hagitaan qoris ah oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan sida loo qoro maqaal caadiya oo isku dhafan. Adoo ka faa'iideysanaya talooyinka uu soo bandhigo qoraa maqaal xirfadeed leh, waxaad waqti iyo lacag kaga badbaadin doontaa tafatirka aan loo baahnayn.
Qaar badan oo ka mid ah qorayaasha qormooyinka ugu guulaha badan waxay adeegsadaan nooc ka mid ah qaab qorista, ama barnaamij dib-u-akhrin ama foom amar dalab ah. Qalabyadan xirfadeed waxay kuu badbaadin karaan waqti waxayna kuu fududeyn karaan noloshaada iyagoo ku siinaya aragti ku saabsan sida aad u qaabeyn laheyd qoraalkaaga. Inta badan barayaasha curinta waxay ka rabaan ardayda inay qoraan ugu yaraan hal qormo si ay isaga diiwaan geliyaan koorsooyinkooda. Si kastaba ha noqotee, arday badan ayaan ka faa'iideysan fursadda ah inay qoraan qormooyin iyaga u gaar ah illaa ay ka dhammaystiraan tusaalooyinka qorista qorista ee bilaashka ah. Isticmaalidda qoritaanka foomka dalabka ama softiweerka dib-u-akhrinta ayaa ah waqtiga ugu habboon ee lagu qancin karo qorista qoraalka.
Sidii aan horayba u soo sheegay, sannadahaagii dugsiga sare ayaa laga yaabaa inay yihiin fursadda ugu fiican ee aad ku horumarin karto xirfadaha qorista oo kuu adeegi doona intaad nooshahay. Xitaa haddii aadan waligaa qorin qormo kahor, waxaad u badan tahay inaad khibrad kuugu filan u leedahay qorista si aad waxoogaa aqoon ah uga hesho sida loo qoro qoraalkayga. Qormooyinka waxaa loo isticmaalaa kulleejooyinka iyo jaamacadaha si loo qiimeeyo heerkaaga aqooneed iyo in la muujiyo fahamkaaga mowduuca. Markaad qoraysid qoraalkaaga, marwalba xusuusnow in dhagaystayaashaadu aysan ahayn akhristaha. Ujeeddada qormadu waa in la caddeeyo inaad karti u leedahay inaad wax ku biiriso waxbarashada ardayga, markaa ku dar oo keliya macluumaadka la xiriira mawduucaaga.
Waxaa jira arday badan oo raba inay qoraalladooda si dhakhso leh u qoraan, laakiin inta badan way quustaan ​​maxaa yeelay si buuxda uma fahmin sida loo qoro qormada. Haddii tani ku sifeyso, tixgeli inaad adeegsatid adeeg maqaal xirfadeed oo kaa caawinaya qoritaanka maqaalkaaga. Waxaad wax badan ka baran kartaa sida adeegga maqaalka xirfadeed u shaqeeyo, iyo sidoo kale tusaalooyin badan oo tusaalooyin qormo ah, adoo booqanaya bogga hoos ku qoran